Ememe Epsom Derby: Ihe Nleba Anya - cheapinternetsecuritysoftware.com
Ọ bụ ngwụcha izu ụka nke Derby na Epsom Downs, nke pụtara ụbọchị ọmarịcha ụbọchị abụọ nke ịgba ọsọ na-echere anyị na Surrey. Oaks bu ihe omuma nke Friday, na-ewere ọnọdụ 24 awa tupu Epsom Derby na-atụsi anya ike.
Kedu onye ị na-achọ inweta mmeri nke Ochie? Ka anyị lelee ụfọdụ ndị na – agba ọsọ ahịa maka mbipụta 2021.
Epsom Oaks ịkụ nzọ
N’agbanyeghị na enweghị ike ịkwado nnabata ihu ọma na 1,000 Guineas, ọkacha mmasị 5/2 maka The Oaks ka zuru iji mejuo Aidan O’Brien, ya na onye nkuzi Ballydoyle kwenyesiri ike na nnabata ya ga-akawanye mma na Newmarket na-egosi.
Otu nwa agbọghọ meriri na Septemba na Curragh, O’Brien ji obi ụtọ na otuto ya na Ryan Moore ga-alaghachi na sadulu maka naanị nke atọ ọ ga-apụ.
Ọzọ dị na agba O’Brien, Snowfall dị oke egwu na York, na-arụ ọrụ kachasị mma iji merie Musidora Stakes n’ọnwa gara aga n’okpuru onye isi Moore. Agbanyeghị, ọ ga – abụ Frankie Dettori nọrọ ọdụ ugbu a.
Ma otu ụzọ a ga-esi na-agba ọsọ n’ihu ga-arụ ọrụ ka ga-ahụ, mana ọ ga-eche asọmpi maka mbu ndu na enwere nchegbu banyere ume. Mana Dettori maara otu ihe ma ọ bụ abụọ gbasara mmeri Oaks na ị nweghị ike ịchịkwa ya.
Teona bụ otu n’ime ndị na-enweghị ike ịlaghachi azụ Snowfall na Musidora, mana a na-azụ ya maka ihe ịga nke ọma na Oaks na nke a ga-abụrịrị ihe mgbaru ọsọ maka ọzụzụ Roger Varian.
Mgbe ọ kụsịrị ebe dị larịị na York, ikike a nwere nkà sitere na Sea-Stars na-emeri Derby chọtara ntakịrị, na-anọ na nke atọ. Ọ na-kara aka n’ihi na nnukwu ihe… ma nke a nwere ike ịbụ nke ukwuu, kwa n’oge na-adịghị.
Maka nsogbu Oaks niile, zọọ nke a na Grosvenor Sport.
Epsom Derby ịkụ nzọ
Ballet Bolshoi (11/10)
Aiden O’Brien ekpebiela iziga naanị otu ịnyịnya n’ọgụ maka Epsom Derby… mana kedu ịnyịnya ọ bụ. Họrọ iziga nkọwa dị elu na Irish Derby mgbe ọnwa a gasịrị, Bolshoi Ballet bụ ugbu a ọkacha mmasị kachasị amasị ịbụ nke mbụ gafere ọkwa na Satọde.
Onye mmeri abụọ na Leopardstown n’afọ a, 3 afọ si Galileo nwere ihe niile nke onye mmeri Derby, ọ nwere ike ịbụ okpukpu abụọ pụrụ iche maka Moore, O’Brien na ụlọ Ballydoyle.
Hyɛ obiara nkuran ma ɔnyɛ akwampaefo aboafo wɔ March mu, na ɔmfa nhoma no mma wɔ April mu. Mohaafeth si okpu-atọ na-agba ọsọ na Newmarket bụ ihe kasị adọrọ mmasị arụmọrụ ma si a 3 afọ na nwere ike ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-abịa.
Onye na-enye ọzụzụ bụ William Haggas meriri onye mbụ ya na Derby 25 afọ gara aga na Shaamit, nwa Frank a nwere ohere ọ bụla nke inyere ya aka okpukpu abụọ ahụ. N’adịghị ka Mac Swiney, Haggas na jockey Jim Crowley ga-enwe olileanya maka ọmarịcha akọrọ na-eme ka ọ nwee ike ịnweta ikike a.
Mac Swiney nyefere arụmọrụ na Irish Guineas Irish na ọnwa gara aga yana nkwụsị nke High Definition, bụ nke nwere ike ịkwụsị Bolshoi Ballet ugbu a na egwu ya dabere na nsogbu Derby ịkụ nzọ.
Jim Bolger ịnyịnya zụrụ azụ kụrụ Bolshoi Ballet na Derrinstown, mana usoro ọmụmụ ya dị mma maka njem ahụ. Ma ọ gaghị eche ntakịrị ihu igwe mmiri iji nyere aka gbanwee tebụl. Onweghi onye mmeri nke ndi Guineas nke Irish 2000 abanyela na Derby kemgbe 1975. Nnukwu jụọ, mana ohere…
Iji lelee mpaghara ndị ọzọ na ọhụụ ọhụụ ịgba ịnyịnya ọ bụla, tinye onwe gị na Grosvenor Sport – yana Ekele kachasị mma na agbụrụ ọ bụla gafere UK na Ireland n’efu.
Tags:Anya Derby Ememe Epsom ihe Nleba